Global Voices teny Malagasy · 11 Oktobra 2017
Tantara tamin'ny 11 Oktobra 2017
Pascua Lama, Shily: Famindràna Vongan-dranomandry Telo
Ankoatra izay, tsy misy ny fiarovana ireo harena voajanahary raha araka ny faritan'ity famintinan'ny Atina Chile (Es) ilay tetikasa misy idiran'ny velarantany 24 hektara hanisahana ireo vongandranomandry telo samihafa ity. Mitondra rano ho an'ny lohasahan'i Huasco ireo vongandranomandry.
Manondrana Infirmiera Ho An'Izao Tontolo Izao I Filipina
Filipina11 Oktobra 2017
Ny infirmeria no diplaomam-pampianarana malaza indrindra any Filipina ankehitriny. Mpanampy mpitsabo avy any Filipina maherin'ny 100.000 no nandao ny firenena mba hitady lalana tsara kokoa.
Anatinà Espaina Mivaky, Midika Inona ny Maha-Espaniola?
Eoropa Andrefana11 Oktobra 2017
"Tsy hoe Espaniôla rehefa milanja ny saina, na mihiakiaka fehezantenim-pankahalàna izay antenaiko fa tsy tsapanao."
Sorakaliana no Nahazoan'i Aoyagi Bisen Tao Japana Mpanjohy Tao Amin'ny Media Sosialy
Nanjary nalaza be ny lahatsarin'i Aoyagi Bisen iray tamin'ny volana Septambra tamin'ny nanoratany ny iray amin'ireo tarehin-tsoratra sarotra indrindra .